Wun Yan – Page 11
လှိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ နေအိမ် (၁)အိမ်မှ ငွေ(၄၈)သိန်းကျပ် တန်ဖိုးရှိ ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ခိုးယူသွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိ
လှိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ နေအိမ် (၁)အိမ်မှ ငွေ(၄၈)သိန်းကျပ် တန်ဖိုးရှိ ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ခိုးယူသွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိ အမှုမှာ ၂၉.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၀၈၂၅ အချိန်တွင် လှိုင်မြို့နယ်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ဘူတာရုံလမ်း၊ အထက(၁) ကျောင်းဝန်းနေ ကျောင်းအုပ် ဒေါ်—- သည် ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ TTC ကျောင်းသို့ သွားရောက် ပြီး ပြန်လာစဉ် နေအိမ်လိုင်းခန်း၏ အိမ်တံခါးသော့မှာ ပွင့်နေသဖြင့်…
ဒူးနာတာကို လုံး၀ ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာ၀ ဆေးနည်း
ဒူးနာတာကို လုံး၀ ပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာ၀ ဆေးနည်း ရှောက်သီး (၁) လုံး ၊ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး၊ နှီး (သို့) ကြိုး (၁)ချောင်း၊ မြေအိုး (၁)လုံး။ ပြုလုပ်ပုံ ရှောက်သီးကို အလယ်မှ ခြမ်းပါ။ ခြမ်းထားသော ရှောက်သီး အတွင်းမှာ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး ထည့်ပါ။ ရှောက်သီး ခြမ်း ၂ ခြမ်းကို ကြက်သွန်နီ…
နေ့နံအလိုက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကျောက်မျက် ရတနာများ
နေ့နံအလိုက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကျောက်မျက် ရတနာတွေကို ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ တနင်္ဂနွေ – ပတ္တမြား သို့မဟုတ် ကျောက်နီ ၂။ တနင်္လာ – ပုလဲ ၃။ အင်္ဂါ – သန္တာ ၄။ ဗုဒ္ဓဟူး – မြ သို့မဟုတ် မြရည်ဝင်သော ကျောက်စိမ်း၊ ၊ပြောင်ခါင်းစိမ်း ၅။ ကြာသပတေး – ဥဿဖရား…
လူသာ အသေခံမယ့် စကားကပ်တဲ့ လှတောသား
လူသာ အသေခံမယ့် စကားကပ်တဲ့ လှတောသား တခါတုန်း အခါကပေါ့ လှတောသားတယောက် ခရီးတခု သွားစရာရှိတော့ လှည်းကြုံ လိုက်ရှာတော့ ဘုန်းကြီးတပါးစီးလာတဲ့ လှည်းနဲ့ကြုံ လိုက်ဖို့လှတောသားက ဆရာတော်ထံခွင့်ပန်တယ် လှတောသားတွေ စကားကပ်တော့ ဆရာတော်က လှည်းကြုံ မတင်ချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဆရာတော်က စကားမများပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ လိုက်ခွင့်တော့ ပြုလိုက်သတဲ့။ လမ်းမှာ ဖွတ်တကောင် ဖြတ်ပြေးတာ တွေ့တော့ ဆရာတော်က ”တွင်းအောင်း…
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဆေးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမည့် အချက် (၅)ချက်
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဆေးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားရမည့် အချက် (၅)ချက် ကိုယ့်ရောဂါက ဆေးရုံဆေးခန်းထိ သွားပြစရာမလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ နီးစပ်ရာဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဆေးဝယ်သောက်လိုက်တာ များပါတယ်။ အနာနဲ့ဆေး တည့်သွားရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကုန်ကျသက်သာ တာပေါ့။ ဒီတော့ ဆေးဝယ်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် ဆောင်ရန် /ရှောင်ရန်တွေက 1. ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကို သေချာပြောပြပါ 2. ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ဆေးတွေရှိရင် ကြိုပြီးပြောပြပေးပါ .. (တချို့ဆို…
မအူပင်မြို့ ခိုင်သော်တာ လမ်းရှိ ခြုံပုတ် အတွင်းမှ ကြေးဘုရား ဆင်းတုတော် တစ်ဆူ တွေ့ရှိ ၊ ဘုရား ခိုးလာသူအား ဖမ်းဆီးရမိ
မအူပင်မြို့ ခိုင်သော်တာ လမ်းရှိ ခြုံပုတ် အတွင်းမှ ကြေးဘုရား ဆင်းတုတော် တစ်ဆူ တွေ့ရှိ ၊ ဘုရား ခိုးလာသူအား ဖမ်းဆီးရမိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမအူပင်မြို့ အမှတ် (၇)ရပ်ကွက် ခိုင်သော်တာလမ်းတွင် အောတိုဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက် (၁)နာရီ (၃၀)မိနစ်အချိန် ကျော်ခန့်က ခြုံပုတ်အတွင်း၌ ခိုးယူလာကာဝှက်ထားသောဘုရားကြေးဆင်းတုတော်တစ်ဆူ အားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းဘုရားခိုးယူလာသူအား ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းသိရသည်။ “ကျွန်တော်က ဆိုင်ကနေအိမ်အပြန် ကျွန်တော်ကိုလည်းသူတွေ့ကော လှစ်ကနဲ့ဆိုခြုံပုတ်ထဲဝင်သွားတယ်……နောက်ပြန်ထွက်လာပြီးလမ်းဆက်လျှောက်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသင်္ကာလို့…
ပျားရည် အတု အစစ် စစ်ဆေးနည်း
ပျားရည် အတု အစစ် စစ်ဆေးနည်း ၁) ပျားရည်ထဲတွင် ဝါဂွမ်းကို စိမ်၍ မီးရှို့ ကြည့်ပါက ပျားရည်စစ်လျှင် မီးစွဲလောင်သည်။ ၂) စက္ကူ ပေါ်တွင် ပျားရည်စက် ချပါက ပျံ့မသွားလျှင် ပျားရည် စစ်သည်။ ၃) ပျားရည်အစစ်တွင် သဘာဝ ပိုးသတ်ဓာတ် ပါဝင်သည့်အတွက် ပုရွက်ဆိပ်မတက်ပါ။ ( ဖိတ်စင်ခြင်းဖြစ်ပါက ပြင်ပလေထဲတွင် ပါဝင်သည့် စိုထိုင်းဓာတ်ကြောင့် ပုရွက်ဆိပ်…
မြေဂရန်လျှောက်ရင် ဘာတွေ လိုအပ်လဲ ဘယ်လောက်ကြာလဲ သိချင်သူတွေ အတွက်
မြေဂရန်လျှောက်ရင် ဘာတွေ လိုအပ်လဲ ဘယ်လောက်ကြာလဲ သိချင်သူတွေ အတွက် ယခင်က မြေငှားဂရန် ထုတ်ပေးမှုများ၌ မြေဧရိယာ (၁)ဧက အထိကို ရက်ပေါင်း(၄၀) အတွင်း ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ထုတ်ပေးပါသည်။ မြေဧရိယာ (၁)ဧက အထက်မှ (၅)ဧက အထိကို ရက်(၆၀)အတွင်း ပြည်နယ်တိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ စိစစ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခရိုင်ထွေအုပ်မှ ထုတ်ပေးပါသည်။ မြေဧရိယာ (၅)ဧက အထက်ကို (၈၁)ရက်…
သရက်ရွက်ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
သရက်ရွက်ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ သရက်ပင်ရဲ့ အရွက်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာ ရှိကြတဲ့အတွက် ဆေးဝါးအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သရက်ရွက်မှာ တန်နင် ခေါ်တဲ့ အန်သိုဆိုင်ရာနင်တွေ ပါ၀င်တဲ့အတွက် ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အသုံး၀င်ပါတယ်။ သူက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကိုလည်း တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုးသတ်ဆေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ ချွဲကြေဆေး၊ ရင်ကျပ်ပန်းနာပျောက်ဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေး၊ ၀မ်းပျော့ဆေးနဲ့ နှလုံးအားကောင်းတဲ့…